Ny birao fizahan-tany any Seychelles France dia mamoaka ny hetsika fanaovana doka any ivelany amin'ny ririnina
Home » Travel Associations News » Ny birao fizahan-tany any Seychelles France dia mamoaka ny hetsika fanaovana doka any ivelany amin'ny ririnina
The Seychelles Tourism Board (STB) nanangana fanentanana dokambarotra ambony any Frantsa izay mikendry ny hanatratra ireo mety ho mpanao fialantsasatra amin'io tsena io.
Ny fanentanana dokam-barotra dia nanomboka ny 11 ka hatramin'ny 24 septambra tao an-drenivohitr'i Paris, Paris, izay nahafahan'ny mpitsidika nanandrana an'i Seychelles tamin'ny alàlan'ny fampisehoana isan-karazany ny paradisa amin'ny Nosy izay natsangana manodidina ny tanàna.
Ny fampielezan-kevitra dia nampiharihary ny firavaka tany tropikaly any amin'ireo nosy Seychelles malaza sy ny fahasamihafan'ireo hetsika natolony ny mpitsidika azy rehetra. Izany dia nanolotra an'i Seychelles ho fialantsasatra ho an'ny mponina mandritra ny fialantsasatra amin'ny ririnina, izay manakaiky haingana.
Miaraka amin'ny fanampian'ny JCDecaux, orinasa frantsay malaza amin'ny doka ivelany, eran-tany, dia namboarina sy napetraka tamin'ny fomba stratejika ny manodidina an'i Paris sy ireo faritra manodidina azy.
Mba hampitomboana ny fiparitahan'ny Seychelles any Paris, dokambarotra panoramic 161 no natsangana tao amin'ny kiosks amin'ny faritra be olona akaikin'ny faritra varotra toa ny Champs Elysees, tranomboky sasany, lapan'ny tanàna, boulevard Haussmann. Ny takelaka fanaovana dokambarotra ivelany dia napetraka ihany koa amin'ny toerana lehibe ao amin'ny manodidina an'i Paris.
Ny bus Parisian Open Tour, bus fitaterana angovo maitso 100% izay manolotra fitsangatsanganana an-drenivohitra, dia nanome an'i Seychelles fampirantiana ihany koa tamin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo endrika tropikaly tamina bus maromaro teo anelanelan'ny 11 sy 24 septambra teo. -Tsangambato fantatry ny renivohitra, isan'andro. Manodidina ny 40% amin'ireo Paris Paris no mividy fahefana mavitrika mividy matetika ireo zotra ireo, ary noho izany dia naseho tamin'ireto sary mahavariana ireto.
Ny biraon'ny STB Paris dia mampitombo hatrany ny fahitana an'i Seychelles amin'ny tsena frantsay amin'ny alàlan'ny media nomerika, izay atokana ho an'ny antsitrika alohan'ny fampisehoana antsitrika iraisam-pirenena any Paris amin'ny volana Janoary 2020. Ary koa, amin'ny alàlan'ny pirinty, ny STB Paris dia mampiroborobo ny tropikaly any Seychelles. tontolo iainana, rano turquoise, morontsiraka be ranomasina ary fiainana an-dranomasina velona, ​​ary koa ny kolontsaina kreôla ho an'ny besinimaro frantsay.
Ny talen'ny birao fizahan-tany any Seychelles ho an'i Eropa, Bernadette Willemin, dia nilaza fa: "Ny drafi-pifandraisana dia natao ho eo afovoan-drenivohitra sy ny manodidina akaiky azy, izay faritra manankarena misy herijika mety hahatongavantsika."
Nanampy koa Ramatoa Willemin fa "ny fampielezan-kevitra any ivelany dia hahatonga ny Seychelles ho hita be eny amin'ny tsena frantsay ary hahatratra ireo mpanao fialantsasatra mety hitranga izay mety tsy hanana fotoana hitsidihana ireo varotra sy atrikasa natao teny an-tsena."
Frantsa dia tsena fizahan-tany lehibe ho an'i Seychelles, izy izao no tsena faharoa lehibe indrindra ho an'i Seychelles, aorian'i Alemana. Taorian'ny nanakatonana ny taona 2018 niaraka tamin'ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika hatramin'ny 6%, dia nanohy naneho famantarana tsara i Frantsa tamin'ny fiandohan'ity taona ity 2019. Ny tarehimarika avy amin'ny birao nasionalin'ny statistika (NBS) dia mampiseho fa hatramin'ny 22 septambra 2019 , Mpitsidika 30,310 no avy any Frantsa.
Ny fanentanana dokam-barotra dia nahavita hetsika mitohy sy ho avy hafa ho an'ny mpanjifa sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany amin'ny fizaran-taona / Ririnina 2019-2020.